ပျိုမေတို့ တစ်လတစ်ခါကြုံတွေ့ရတဲ့ စိတ်ဓာတ်ကျဆင်းမှုဝေဒနာကို ဘယ်လိုရင်ဆိုင်မလဲ? – Shwe Yaung Lan
အမျိုးသမီးတွေဟာ လစဉ် ဓမ္မတာလာချိန်မှာ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဝေဒနာကိုရော စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဝေဒနာကိုပါ ခံစားကြရပါတယ်။ ဓမ္မတာလာခါနီး ရက်ပိုင်းအလိုမှာကတည်းက ဝေဒနာတချို့ကို စတင်ခံစားကြရတာပါ။ အဲဒါလို ဓမ္မတာအကြိုဝေဒနာလက္ခဏာရပ် Premenstrual Syndrome (PMS) လို့ ခေါ်ဝေါ်ပါတယ်။ အဲဒီလို လက္ခဏာရပ်တွေထဲမှာ စိတ်တိုခြင်း၊ စိတ်အလိုမကျခြင်းနဲ့ ဝမ်းနည်းခြင်းတို့ ပါဝင်ပါတယ်။ စိတ်ဖိအားများခြင်းနဲ့ စိတ်ဓာတ်ကျဆင်းခြင်းတို့လို စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဝေဒနာတွေ ဖြစ်ပေါ်တာကိုတော့ Premenstrual Dysphoric Disorder (PMDD) လို့ ခေါ်ပါတယ်။
ဓမ္မတာမလာခင်ကတည်းက ကြိုတင်ကြုံတွေ့ရတဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝေဒနာတွေက ဘာတွေလဲ?
စိတ်ဖိအားများခြင်း၊ အလိုလို စိတ်ဓာတ်ကျဆင်းခြင်း၊ စိုးရိမ်ကြောင့်ကြခြင်း၊ အလိုလို ဒေါသထွက်ခြင်း၊ သတိမေ့ခြင်း၊ အလိုလို ငိုချင်စိတ်ပေါက်ခြင်း၊ အအိပ်လွန်ကဲခြင်း သို့မဟုတ် အအိပ်နည်းလွန်းခြင်းနဲ့ အစားနည်းလွန်းခြင်း သို့မဟုတ် အစားများလွန်းခြင်းတို့ ဖြစ်ပါတယ်။
PMDD ရဲ့ လက္ခဏာရပ်တွေကတော့ စိတ်မထိန်းနိုင်ခြင်း၊ မျှော်လင့်ချက်မဲ့ခြင်း၊ စိတ်ခံစားမှုလွန်ကဲခြင်း၊ အလိုလို မျက်ရည်ကျခြင်း၊ အာရုံစူးစိုက်မှုကျဆင်းခြင်း၊ အစားအသောက်ပျက်ခြင်း၊ ပုံမှန်ထက် ပင်ပန်းနွမ်းနယ် ခြင်း၊ ဘယ်အရာကိုမှ စိတ်မဝင်စားခြင်းနဲ့ အလုပ်လုပ်ချင်စိတ်မရှိခြင်း တို့ပါပဲ။
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝေဒနာတွေကို ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ အကြောင်းအရင်း
ဓမ္မတာလာချိန်မှာ အဲဒီလိုဝေဒနာတွေ ပေါ်ပေါက်ရတဲ့အကြောင်းအရင်းကတော့ သင့်ရဲ့အစားစားချင်စိတ်၊ အိပ်တဲ့အလေ့အကျင့်နဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတို့အပေါ် သက်ရောက်မှုရှိတဲ့ Serotonin ဓာတ် နည်းပါးခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီဓာတ်နည်းပါးခြင်းကြောင့် စိတ်စိုးမာန်စိုးဖြစ်ခြင်း၊ အလိုလိုဝမ်းနည်းခြင်း၊ အစာစားခြင်းနဲ့ အိပ်ခြင်းကို ပုံမမှန်ဖြစ်စေခြင်း စတဲ့ PMS လက္ခဏာရပ်တွေကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။
ပျိုမေတို့ အလိုလိုနေရင်း စိတ်ဓာတ်တွေကျလာပြီး ဘာမှမဟုတ်ဘဲ အလိုလိုဝမ်းနည်းအားငယ်လာပြီ ဒါမှမဟုတ် ဘာမဟုတ်တာလေးနဲ့ ဒေါသတွေအရမ်းထွက်မိပြီ ဆိုရင်တော့ ဓမ္မတာလာမယ့်ရက်နီးလာပြီဆိုတာ သိနိုင်ပါတယ်။
အဲဒီလိုဝေဒနာတွေကို သက်သာအောင် ဘယ်လိုလိုက်နာမလဲ?
(၁) ဗီတာမင်နဲ့ ဖြည့်စွက်စာ
တချို့ဗီတာမင်တွေက ဓမ္မတာမလာခင်နဲ့ လာနေစဉ်အတွင်း စိတ်ဓာတ်ကျဆင်းခြင်းကို လျော့ပါးသက်သာစေပြီး ကယ်လ်ဆီယမ်ဓာတ်ပါဝင်တဲ့ ဖြည့်စွက်စာတွေကလည်း ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း၊ အစာစားချင်စိတ်မရှိခြင်းနဲ့ စိတ်ဓာတ်ကျဆင်းခြင်းလို PMS လက္ခဏာရပ်တွေကို လျော့ပါးစေပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် နွားနို့၊ ချိစ်၊ ဒိန်ချဉ်၊ ကွေကာ၊ လိမ္မော်ရည်နဲ့ အစိမ်းရောင်ရှိတဲ့ အသီးအရွက်တွေလို ကယ်လ်ဆီယမ်ဓာတ် ပြည့်ဝတဲ့ စားစရာတွေ စားပေးသင့်ပါတယ်။ ဒါ့ပြင် ဗီတာမင် B6 ဓာတ် ကြွယ်ဝတဲ့ ငါး၊ သစ်သီး၊ ကြက်ဆင်နဲ့ ကြက်သားတွေတင်မက ဗီတာမင် B6 ဖြည့်စွက်စာတွေကလည်း အဒီလိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဝေဒနာတွေကို လျော့ပါးသက်သာစေပါတယ်။
အနည်းဆုံး မိနစ် ၃၀ လောက် လေ့ကျင့်ခန်း ပုံမှန်လုပ်ပေးခြင်းနဲ့ နေ့စဉ်လမ်းလျှောက်ခြင်းတို့ကလည်း ဓမ္မတာ လာချိန်မှာ စိတ်ဓာတ်ကျဆင်းခြင်းနဲ့ အာရုံစူးစိုက်နိုင်မှု နည်းပါးခြင်းတို့ကို သက်သာစေပါတယ်။
သကြား၊ ဆားနဲ့ အဆီတွေကို လုံးဝမစားရတာမဟုတ်ပေမဲ့ အသီးအရွက်၊ သစ်သီး၊ ဂျုံတို့နဲ့ သမမျှတအောင် စားပေးသင့်ပါတယ်။ အရက်၊ ဆေးလိပ်နဲ့ ကဖိန်းဓာတ်ကို ရှောင်တာဟာလည်း အဲဒီဝေဒနာတွေကို လျော့ပါးစေမှာပါ။
ဓမ္မတာမလာခင် အနည်ဆုံးတစ်ပတ် ဒါမှမဟုတ် နှစ်ပတ် ကြိုတင်ပြီး တစ်ညကို အနည်းဆုံး ၇ နာရီကနေ ၈ နာရီအထိ ပုံမှန်အိပ်စက်ပေးသင့်ပါတယ်။ အိပ်ရေးမဝခြင်းဟာ ဓမ္မတာမလာခင် စိတ်ဓာတ်ကျဆင်းခြင်းကို ပိုမို ဆိုးရွားစေနိုင်ပါတယ်။
မထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုတွေဟာလည်း ဓမ္မတာလာနေစဉ်အတွင်း ခံစားရတဲ့ စိတ်ဓာတ်ကျဆင်းမှုကို ပိုမို ဆိုးရွားစေပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် စိတ်ဖိစီးမှုလျော့ပါးစေဖို့အတွက် တရားထိုင်ခြင်း၊ ယောဂ၊ စိတ်နဲ့ ခန္ဓာကိုယ် အေးချမ်းစေဖို့ အသက်ပြင်းပြင်းရှူတဲ့လေကျင့်ခန်းတို့ကို ပြုလုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။
(၆) ဆေးသောက်ခြင်းနဲ့ သားဖွားမီးယပ်ပါရဂူရဲ့ အကြံဉာဏ်ကိုရယူခြင်း
တခြားနည်းလမ်းတွေက သင့်အတွက် အလုပ်မဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့ တတ်ကျွမ်းနားလည်တဲ့ ဆေးပညာရှင်ရဲ့ ညွှန်ကြားချက်နဲ့ သက်ဆိုင်ရာ ဆေးတစ်ခုခု သောက်သုံးနိုင်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် သင့်ရဲ့ သားဖွားမီးယပ်ပါရဂူနဲ့ သွားရောက်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
ပြိုမတေို့ တဈလတဈခါကွုံတှရေ့တဲ့ စိတျဓာတျကဆြငျးမှုဝဒေနာကို ဘယျလိုရငျဆိုငျမလဲ?
အမြိုးသမီးတှဟော လစဉျ ဓမ်မတာလာခြိနျမှာ ရုပျပိုငျးဆိုငျရာ ဝဒေနာကိုရော စိတျပိုငျးဆိုငျရာ ဝဒေနာကိုပါ ခံစားကွရပါတယျ။ ဓမ်မတာလာခါနီး ရကျပိုငျးအလိုမှာကတညျးက ဝဒေနာတခြို့ကို စတငျခံစားကွရတာပါ။ အဲဒါလို ဓမ်မတာအကွိုဝဒေနာလက်ခဏာရပျ Premenstrual Syndrome (PMS) လို့ ချေါဝျေါပါတယျ။ အဲဒီလို လက်ခဏာရပျတှထေဲမှာ စိတျတိုခွငျး၊ စိတျအလိုမကခြွငျးနဲ့ ဝမျးနညျးခွငျးတို့ ပါဝငျပါတယျ။ စိတျဖိအားမြားခွငျးနဲ့ စိတျဓာတျကဆြငျးခွငျးတို့လို စိတျပိုငျးဆိုငျရာ ဝဒေနာတှေ ဖွဈပျေါတာကိုတော့ Premenstrual Dysphoric Disorder (PMDD) လို့ ချေါပါတယျ။
ဓမ်မတာမလာခငျကတညျးက ကွိုတငျကွုံတှရေ့တဲ့ စိတျပိုငျးဆိုငျရာဝဒေနာတှကေ ဘာတှလေဲ?
စိတျဖိအားမြားခွငျး၊ အလိုလို စိတျဓာတျကဆြငျးခွငျး၊ စိုးရိမျကွောငျ့ကွခွငျး၊ အလိုလို ဒေါသထှကျခွငျး၊ သတိမခွေ့ငျး၊ အလိုလို ငိုခငျြစိတျပေါကျခွငျး၊ အအိပျလှနျကဲခွငျး သို့မဟုတျ အအိပျနညျးလှနျးခွငျးနဲ့ အစားနညျးလှနျးခွငျး သို့မဟုတျ အစားမြားလှနျးခွငျးတို့ ဖွဈပါတယျ။
PMDD ရဲ့ လက်ခဏာရပျတှကေတော့ စိတျမထိနျးနိုငျခွငျး၊ မြှျောလငျ့ခကျြမဲ့ခွငျး၊ စိတျခံစားမှုလှနျကဲခွငျး၊ အလိုလို မကျြရညျကခြွငျး၊ အာရုံစူးစိုကျမှုကဆြငျးခွငျး၊ အစားအသောကျပကျြခွငျး၊ ပုံမှနျထကျ ပငျပနျးနှမျးနယျ ခွငျး၊ ဘယျအရာကိုမှ စိတျမဝငျစားခွငျးနဲ့ အလုပျလုပျခငျြစိတျမရှိခွငျး တို့ပါပဲ။
စိတျပိုငျးဆိုငျရာဝဒေနာတှကေို ဖွဈပျေါစတေဲ့ အကွောငျးအရငျး
ဓမ်မတာလာခြိနျမှာ အဲဒီလိုဝဒေနာတှေ ပျေါပေါကျရတဲ့အကွောငျးအရငျးကတော့ သငျ့ရဲ့အစားစားခငျြစိတျ၊ အိပျတဲ့အလအေ့ကငျြ့နဲ့ စိတျပိုငျးဆိုငျရာတို့အပျေါ သကျရောကျမှုရှိတဲ့ Serotonin ဓာတျ နညျးပါးခွငျးကွောငျ့ ဖွဈပါတယျ။ အဲဒီဓာတျနညျးပါးခွငျးကွောငျ့ စိတျစိုးမာနျစိုးဖွဈခွငျး၊ အလိုလိုဝမျးနညျးခွငျး၊ အစာစားခွငျးနဲ့ အိပျခွငျးကို ပုံမမှနျဖွဈစခွေငျး စတဲ့ PMS လက်ခဏာရပျတှကေို ဖွဈပျေါစပေါတယျ။
ပြိုမတေို့ အလိုလိုနရေငျး စိတျဓာတျတှကေလြာပွီး ဘာမှမဟုတျဘဲ အလိုလိုဝမျးနညျးအားငယျလာပွီ ဒါမှမဟုတျ ဘာမဟုတျတာလေးနဲ့ ဒေါသတှအေရမျးထှကျမိပွီ ဆိုရငျတော့ ဓမ်မတာလာမယျ့ရကျနီးလာပွီဆိုတာ သိနိုငျပါတယျ။
အဲဒီလိုဝဒေနာတှကေို သကျသာအောငျ ဘယျလိုလိုကျနာမလဲ?
(၁) ဗီတာမငျနဲ့ ဖွညျ့စှကျစာ
တခြို့ဗီတာမငျတှကေ ဓမ်မတာမလာခငျနဲ့ လာနစေဉျအတှငျး စိတျဓာတျကဆြငျးခွငျးကို လြော့ပါးသကျသာစပွေီး ကယျလျဆီယမျဓာတျပါဝငျတဲ့ ဖွညျ့စှကျစာတှကေလညျး ပငျပနျးနှမျးနယျခွငျး၊ အစာစားခငျြစိတျမရှိခွငျးနဲ့ စိတျဓာတျကဆြငျးခွငျးလို PMS လက်ခဏာရပျတှကေို လြော့ပါးစပေါတယျ။ အဲဒါကွောငျ့ နှားနို့၊ ခြိဈ၊ ဒိနျခဉျြ၊ ကှကော၊ လိမ်မျောရညျနဲ့ အစိမျးရောငျရှိတဲ့ အသီးအရှကျတှလေို ကယျလျဆီယမျဓာတျ ပွညျ့ဝတဲ့ စားစရာတှေ စားပေးသငျ့ပါတယျ။ ဒါ့ပွငျ ဗီတာမငျ B6 ဓာတျ ကွှယျဝတဲ့ ငါး၊ သဈသီး၊ ကွကျဆငျနဲ့ ကွကျသားတှတေငျမက ဗီတာမငျ B6 ဖွညျ့စှကျစာတှကေလညျး အဒီလိုစိတျပိုငျးဆိုငျရာ ဝဒေနာတှကေို လြော့ပါးသကျသာစပေါတယျ။
အနညျးဆုံး မိနဈ ၃၀ လောကျ လကေ့ငျြ့ခနျး ပုံမှနျလုပျပေးခွငျးနဲ့ နစေ့ဉျလမျးလြှောကျခွငျးတို့ကလညျး ဓမ်မတာ လာခြိနျမှာ စိတျဓာတျကဆြငျးခွငျးနဲ့ အာရုံစူးစိုကျနိုငျမှု နညျးပါးခွငျးတို့ကို သကျသာစပေါတယျ။
သကွား၊ ဆားနဲ့ အဆီတှကေို လုံးဝမစားရတာမဟုတျပမေဲ့ အသီးအရှကျ၊ သဈသီး၊ ဂြုံတို့နဲ့ သမမြှတအောငျ စားပေးသငျ့ပါတယျ။ အရကျ၊ ဆေးလိပျနဲ့ ကဖိနျးဓာတျကို ရှောငျတာဟာလညျး အဲဒီဝဒေနာတှကေို လြော့ပါးစမှောပါ။
ဓမ်မတာမလာခငျ အနညျဆုံးတဈပတျ ဒါမှမဟုတျ နှဈပတျ ကွိုတငျပွီး တဈညကို အနညျးဆုံး ၇ နာရီကနေ ၈ နာရီအထိ ပုံမှနျအိပျစကျပေးသငျ့ပါတယျ။ အိပျရေးမဝခွငျးဟာ ဓမ်မတာမလာခငျ စိတျဓာတျကဆြငျးခွငျးကို ပိုမို ဆိုးရှားစနေိုငျပါတယျ။
မထိနျးခြုပျနိုငျတဲ့ စိတျဖိစီးမှုတှဟောလညျး ဓမ်မတာလာနစေဉျအတှငျး ခံစားရတဲ့ စိတျဓာတျကဆြငျးမှုကို ပိုမို ဆိုးရှားစပေါတယျ။ အဲဒါကွောငျ့ စိတျဖိစီးမှုလြော့ပါးစဖေို့အတှကျ တရားထိုငျခွငျး၊ ယောဂ၊ စိတျနဲ့ ခန်ဓာကိုယျ အေးခမျြးစဖေို့ အသကျပွငျးပွငျးရှူတဲ့လကေငျြ့ခနျးတို့ကို ပွုလုပျပေးသငျ့ပါတယျ။
(၆) ဆေးသောကျခွငျးနဲ့ သားဖှားမီးယပျပါရဂူရဲ့ အကွံဉာဏျကိုရယူခွငျး
တခွားနညျးလမျးတှကေ သငျ့အတှကျ အလုပျမဖွဈဘူးဆိုရငျတော့ တတျကြှမျးနားလညျတဲ့ ဆေးပညာရှငျရဲ့ ညှနျကွားခကျြနဲ့ သကျဆိုငျရာ ဆေးတဈခုခု သောကျသုံးနိုငျပါတယျ။ ဒါမှမဟုတျ သငျ့ရဲ့ သားဖှားမီးယပျပါရဂူနဲ့ သှားရောကျဆှေးနှေးသငျ့ပါတယျ။
PREVIOUS POST Previous post: ဇနီးဖြစ်သူဟာ မယားငယ်မဟုတ်ကြောင်း တုန့်ပြန်ဖြေရှင်းလိုက်တဲ့ ကိုဥက္ကာကျော်